ट्याग: klout | Martech Zone
यहाँ छ कि तपाईं कसरी प्रभावकारी मार्केटिंगको साथ जलाउनु हुँदैन
शुक्रवार, अक्टुबर 3, 2014 बिहीबार, फेब्रुअरी 25, 2021 Douglas Karr
हामीले प्रभाव मार्केटिंगको पासोको बारेमा अघि लेखिसकेका छौं। एक जसलाई समय समयमा एक प्रभावकर्ताका रूपमा क्षतिपूर्ति दिइन्छ, म सचेत छु कति मार्केटिंग सम्बन्धहरू कत्तिको प्रभाव सेटअप हुन्छन्। मुद्दाको रूपमा, यस बर्षको सुरुमा मलाई ब्रिकयार्डमा आमन्त्रित गरियो किनभने म सोशल मिडियामा स्थानीय प्रभावकारी हुँ। त्यहाँ सामाजिक मिडियाबाट मानिसहरू आमन्त्रित भएका थिए - सबै इन्डियानापोलिसको लागि लोकप्रिय प्रभाव स्कोरिंग इञ्जिनमा उच्च स्कोरको साथ। को
२ Aw अद्भुत सामाजिक मीडिया उपकरणहरू
शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० Douglas Karr
यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू तिनीहरूको लक्ष्य र सुविधाहरूमा बिभिन्न भिन्न छन्। २०१ Social सोशल मिडिया रणनीति शिखर सम्मेलनको यो इन्फोग्राफिकले कोटीहरू राम्ररी तोड्दछ। जब कम्पनीको सामाजिक रणनीतिको योजना बनाउँदैछ, सामाजिक मिडिया व्यवस्थापनको लागि उपलब्ध उपकरणहरूको सरासर संख्या भारी हुन सक्छ। हामीले २ and ठूला उपकरणहरू कम्पाइल गरेका छौं जुन तपाईं र तपाईंको टीम सुरु गर्नका लागि 2013 प्रकारका उपकरणहरूमा वर्गीकृत गरिएको छ: सामाजिक सुन्ने, सामाजिक कुराकानी, सामाजिक मार्केटिंग, सामाजिक विश्लेषक
मैले केहि अगाडि क्लोआटको बारेमा सुनेकी थिएँ तर मैले लास भेगासमा Klout टीमको केही भेट नगरुन्जेल धेरै ध्यान दिएन। मैले यसलाई जाँचें र पत्ता लगाए कि केहि अभावहरू थिए। उदाहरण को लागी, हामी मध्ये धेरै पृष्ठहरु, धेरै खाताहरु, र एक इतिहास अनलाइन कि एक दशक फैलिएको थियो ... तर Klout कि सबै को द्वारा प्रभावित थिएन। पछिल्लो पटक Klout ले यो स्कोर अपडेट गर्‍यो, तिनीहरूले मलाई गुमाए। को
नम्बरहरू फरक पर्दछ जब यो अनलाइन मार्केटिंगको आउँदछ। म Klout को आलोचना भइरहेको छु तर म अझै पनी चाहन्छु कि कम्पनीहरूले ठाउँ र अनलाइन प्रभावको मानिस निर्धारण गर्न सरल मेट्रिक्स विकास गर्न कोशिस गर्दैछन्। म Klout अ too्क धेरै बुझ्दछु, र म यसको बारेमा धेरै चिन्ता पनि गर्दिन। तर ... समय-समयमा, म मेरो Klout स्कोर मा चेक इन गर्छु (Klout आईफोन अनुप्रयोग तपाईंलाई यसको प्रदर्शन दिनुहोस्!)। यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने
तपाईको प्रोस्कोर के हो?
आइतबार, डिसेम्बर 18, 2011 Douglas Karr
स्कोरिंग ईन्डस्ट्रीमा अहिले धेरै आन्दोलन भइरहेको छ। मलाई लाग्छ Klout आलोचना को एक बिट मिल्यो छ ... यो गाह्रो छ कुनै पनि क्षेत्र मा ब्लक मा पहिलो मान्छे हुनु। म कृतज्ञ छु कि कसैले उद्योगमा पहिलो अधिकार स्कोर विकास गर्न कडा कार्य उठायो, र आशा छ कि उनीहरू आफ्नो एल्गोरिदम अनुकूलन गर्न सक्षम छन् र तिनीहरूलाई विकास गर्न जारी राख्छ। प्रतिस्पर्धी मध्ये एक म माथि देखा परेको छ
बुधबार, अप्रिल 21, 2010 शनिबार, जून १,, २०१। Douglas Karr
ध्यान सामाजिक मिडिया बजारहरू: अनुयायीहरूको संख्या प्रभावको एक मजबूत सूचक होईन। अवश्य ... यो स्पष्ट र सजिलो छ - तर यो पनि अल्छी छ। प्रशंसक वा अनुयायीहरूको स often्ख्याको प्रायः कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले अरूलाई प्रभाव पार्ने क्षमतासँग केही गर्न सक्दैन। प्रभाव अनलाइन को सात विशेषताहरु प्रभावकर्ता मुख्य रूपमा प्रासंगिक कुराकानीमा संलग्न हुनु पर्छ। एक बजियन अनुयायीहरूको साथ एक अभिनेता को अर्थ यो होइन कि तिनीहरूले अरूलाई तपाइँको उत्पादन को बारे मा प्रभाव पार्न सक्छ